हाम्रो प्रेम अंकुराउँदा अंकुराउँदै छिमलियो | nepalbritain.com
हाम्रो प्रेम अंकुराउँदा अंकुराउँदै छिमलियो
रविना रोकाया, लेखिका
‘पिउनकी छोरी आई है भन्दै मेरो अपमान गर्थे, मन चसक्क दुख्थ्यो, कस्तो छुद्र मान्छे भनेर मनमनै गाली गर्थें,’ विगतको सम्झना यसरी सुनाइन् रविना रोकायाले । पुनः अपमान हुने डरले स्कुल–घरबाहेक उनी अन्यत्र जाँदिन थिइन् । पेसा र व्यवसाय गरेर खान पनि नदिने मुगुको गमगढी एसएलसी दिनेवित्तिकै उनले छाडिन् । बालबालिकालाई दिने टर्चर, महिलामाथि हुने व्यवहारले रविनाको हृदय छुन्थ्यो । उच्च शिक्षा अध्ययन नसक्दै उनले मुगुको जनजीवनमा आधारित धर्मकन्या सामाजिक उपन्यास लेखिन् । उनको उपन्यास, लेखक बन्ने उत्साह र मुगुको वास्तविक जीवनबारे कालिका महतले रविनासँग गरेको कुराकानी ः
० धर्मकन्याभन्दा अगाडि पनि केही पुस्तक लेख्नुभएको थियो ?
– बालकथा लेखेकी थिएँ ०६८ सालमा । त्यो राजधानी आइपुग्न पाएन, मुगुमै बिक्री वितरण भयो ।
० धर्मकन्याको सन्देश ?
– यो सामाजिक उपन्यास हो, यसमा मुगुको जनजीवनको प्रस्ट चित्र उतार्न खोजिएको छ । विशेषगरी महिलामाथि हुने हिंसा, सौतेनी आमाको व्यवहार, केही गर्न खोज्ने महिलालाई निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्तिलाई देखाउन खोजिएको छ ।
० यो उपन्यास यथार्थमा आधारित हो ?
– घटनाप्रधान हो, कसैको जीवनसँग मेल खाला, तर मैले सत्यता र कल्पनाको समिश्रणमा उपन्यास उतारेकी हुँ ।
० उपन्यास लेख्न के कुराले पे्ररित ग¥यो ?
– मुगु कर्णालीको विकट जिल्ला हो, बाहिरका मान्छे आएर रारा तालको वर्णन गर्छन्, सामाजिक घटना फिल्ममा उतार्छन् । बाहिरबाट आएकालाई भन्दा मुगुको सामाजिक वास्तविकता हामीलाई बढी थाहा छ, हामीले अनुभव गरेका छौं, भोगेका छौं । यी कुरालाई पुस्तकमा किन लिपिबद्ध नगर्ने ? भनेर मूर्तरूप दिएकी हुँ । त्यस अर्थमा म मुगुको पहिलो लेखिका पनि हुँ ।
० धर्मकन्यामा उल्लेख भए जस्तै हो, मुगुका महिलाको जीवन ?
– सदरमुकामबाहेक ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूको अवस्था उपन्यासमा चित्रण गरेको भन्दा पनि अझ दर्दनाक छ । छोरीलाई मान्छेको दर्जामा नराख्ने प्रवृत्ति, वंश धान्ने छोरालाई दिइने सुविधाले गर्दा एकदमै ठूलो विभेद छ । त्यो विभेदको सिकार छोरीलाई नबनाइने हो भने उसले पनि केही गर्न सक्छे भन्ने उदाहरण मैले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेकी छु ।
० पछिल्लो समयमा त परिवर्तन आयो होला नि ?
– परिवर्तन त आयो, तर सदरमुकाममा सीमित छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच गाउँ–गाउँमा पुग्न सकेको छैन । मुगुका ग्रामीण महिलाको अवस्था एकदमै कहालीलाग्दो र बिर्सनलायक छ ।
० महिलाको शोषणमा महिला पनि होलान् नि ?
– त्यो पनि एउटा समाजको फ्याक्टर हो । सौतेनी आमाको व्यवहार, दिदीबहिनी र दाजुभाइसँगको सम्बन्ध तथा प्रगतितर्फ उन्मुख महिलालाई अघि बढ्न नदिने प्रवृत्ति समाजमा विद्यमान छ, जुन शिक्षा र चेतनाको अभावले भएको हो । अवसर पाए महिलाले पनि पुरुषसरह योगदान दिन सक्छन् भन्ने चेतना मुगुमा पुगिसकेको छैन ।
० मुगुको पहिलो लेखक बन्न उपन्यास लेख्नुभएको त होइन ?
– होइन, सानै उमेरमा मैले गायिका कोमल वलीलाई रारामा भेटेकी थिएँ, उहाँजस्तै चर्चित बन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो । तर मसँग त्यस्तो कला थिएन, यद्यपि म सानैदेखि बालकथा लेख्थें । लेखन विधा मेरा लागि प्रिय लाग्छ । मैले लेख्नुको अर्थ म आफू चर्चित हुन होइन, मुगुलाई प्रसिद्ध बनाउन हो । मुगुको भौगोलिक र सामाजिक अवस्थाको जानकारी सबैलाई गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेर लेखन विधा रोजेकी हुँ ।
० मुगुका महिलाको पीडाबोध गर्ने तपाईं पनि पीडित हुनुहुन्छ ?
– म पीडित छैन, म त्यस्तो भाग्यमानी हुँ, जो मेरा अभिभावकले सरकारी कार्यालयमा सहयोगीको जागिर खाएर पनि भाइ र मलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउनुभयो । उच्च शिक्षा हासिल गर्न नेपालगन्ज पठाउनुभयो, अहिले काठमाडौंमा बसाइँ छ ।
० मुगुबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकिँदैन ?
– आफूले रोजेको विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकिँदैन, बाध्य भएर नेपालगन्ज बसें, त्यसपछि अझ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि काठमाडौं आएकी हुँ । मुगुमा शिक्षाशास्त्रमा मात्र स्नातकसम्मको पढाइ हुन्छ । मेरो अभिभावकको चाहनाअनुसार व्यवस्थापन विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्दैछु ।
० आख्यान लेखन मात्र हो ?
– हो, विशेष कथा र उपन्यास मेरा रुचिका विधा हुन्, कविता मन पर्छ, लेख्न भाँती पुग्दैन ।
० नयाँ कृति पनि आउँदैछ कि ?
– तत्काललाई कुनै योजना छैन, लेखनलाई निरन्तरता दिने मेरो योजनालाई भाग्यले कत्तिको साथ दिन्छ, अहिले भन्न सक्दिनँ । तर कुशल लेखिका बन्ने मेरो चाहना र योजना हो ।
० प्रकाशक सजिलै भेट्नुभयो ?
– निक्कै कठिन भयो, तर जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेजस्तै भेटेँ ।
० कति खर्च भयो ?
– एक लाख ४० हजार रुपैयाँ प्रकाशकलाई बुझाएपछि पुस्तक छापियो ।
० कहाँबाट ल्याउनुभयो पैसा ?
– अभिभावकले खर्च हाल्दिनुभएको हो ।
० पुस्तक पढेपछि पाठकले के पाउँछन् ?
– मुगुको जनजीवन, घरपरिवार र समाज । समाज एकअर्काको सहयोगका लागि बनेको हुन्छ । पैसाको पछि लाग्नुभन्दा समाजमा एउटा भए पनि सकारात्मक काम गरौं भन्ने म्यासेज पाइन्छ ।
० लेखेर जीविकोर्पाजन हुन्छ ?
– तत्काल चाहिँ मैले देखेको छैन, तर लेखनको भविष्य नराम्रो चाहिँ छैन ।
० अभिभावक के गर्नुहुन्छ ?
– स–सानो होटल व्यवसाय छ, विशेषगरी आमाले व्यवसाय सम्हाल्नुभएको छ, बुबा सरकारी कार्यालयमा सहयोगी हुनुहुन्छ । बाँकी समय त्यही व्यवसायमा बुवा संलग्न हुनुहुन्छ ।
० परिवारमा कतिजना ?
– म ठूली छोरी हुँ, दुई भाइ छन् । उनीहरू स्कुल पढ्दैछन् ।
– छैन, महिलामाथि यो समाजले गरेको व्यवहार देख्दा विवाहप्रति नै घृणा जागेर आउँछ । त्यसो भन्दैमा अहिले नै पारिवारिक जीवनबारे कुनै सोच भने बनाएकी छैन ।
० अविवाहित बस्नु समस्याको समाधान हो त ?
– होइन, तर मुगुका महिलाहरूले जुन पीडा सहेर बसेका छन्, त्यो सहन म सक्दिनँ कि भन्ने हो । विद्रोही र अराजक स्वभावकी छु, त्यसैले मेरो दिमागमा त्यस्ता कुरा आएका होलान् ।
० मन मिल्ने नभेटेर हो कि ?
– विवाह गरौं, पे्रम गरौं भन्ने प्रस्ताव त आइरहन्छ, तर मलाई त्यस्ता कुरामा विश्वास लाग्दैन । केटीलाई प्रोपोज गर्नु अस्वाभाविक होइन, यद्यपि जीवनले एउटा मोड लिएपछि त्यस विषयमा सोच्न सकिन्छ ।
० स्कुल कलेज पढ्दा लभ परेन ?
– मन परेको त स्कुल पढ्दाको त्यो केटो थियो नि, तर के गर्नु बोलचाल नै नभई बे्रकअप भइदियो । परिवारको अवरोधले हाम्रो पे्रम अंकुराउँदा अंकुराउँदै छिमलियो ।
० पुनः अंकुराउने सम्भावना छैन ?
– सम्भावना कम देख्छु, किनभने ऊ यतिबेला रिलेसनमा छ । कसैको खुसी खोस्नु मेरा लागि पाप हो । त्यसैले उसँगको पुनर्मिलनको आशा मारिसकेकी छु ।